စျေးနှုန်းသင့်တင့်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ 2in 1 lipstick အသစ်လေး | CosmeticMyanmar
Home » Article » စျေးနှုန်းသင့်တင့်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ 2in 1 lipstick အသစ်လေး
နှုတ်ခမ်းနီသရဲလေးတွေလက်ထောင် နှုတ်ခမ်းနီဆိုရင် ဘယ်အရောင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်လိုက်တာမျိုး ကိုယ့်ဆီမှာရှိပြီးသားအရောင်ကိုတောင် ဘူးပုံစံလေးချစ်လို့ ကြိုက်လို့ဆိုပြီး ဝယ်လိုက်တဲ့သူလေးတွေကရှိသေးတယ်။ နှုတ်ခမ်းနီလေးတွေဝယ်စုတတ်တဲ့ ဝါဿနာအိုးလေးတွေကလည်း မနည်းလေ။ အဲ့လိုလူလေးတွေကို အခုလည်း သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပေးချင်လို့ နှုတ်ခမ်းနီ brand အသစ်လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာပါ။
ဘာ brandလေးလဲသိလား? စျေးကြီးကြီးတွေ မဟုတ်ဘူးနော်။ စျေးလေးကလည်းသင့်တင့်ပြီးတော့ဆိုးရတာပေါ့ပါးတဲ့အပြင် အသားရောင်တိုင်းနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ beauty brand လေးတစ်ခုအြဖစ်နဲ့ ဝင်ရောက်လာတဲ့ Mabel Cosmetics Brand လေးပါ။ July လလောက်ကမှ စျေးကွက်ထဲ ဝင်ရောက်လာတဲ့ brand လေးလည်း ဖြစ်ပြီးတော့ စျေးနှုန်းကလည်း မထင်မှတ်ထားလောက်အောင် သင့်တင့်နေပါတယ်။ Mabel လေးကတော့ အမျိုးအစားစုံလင်စွာရှိပြီးတော့ foundation, lipsticks, brows cake, Mascara, Blusher, Eyeliner, Eyeshadow ဆိုပြီး အစုံကို ထုတ်ထားတာပါ။
အဲ့ထဲကမှ နှုတ်ခမ်းနီလေးတွေကို ပြောပြပေးမှာပါ။ နှုတ်ခမ်းနီလေးက အရောင် ၆ရောင်ရှိပြီးတော့2in 1 ဖြစ်ပါတယ်။2in 1 ကတော့ တစ်ဖက်မှာ matte lipstick ကို ရိုးရိုး lipstick ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့ တစ်ဖက်ကတော့ applicator နဲ့ဆိုးရတဲ့ lip cream ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ Matte တွေဆိုးရလို့ နှုတ်ခမ်းခြောက်မှာစိုးရိမ်ရတဲ့ သူလေးတွေအတွက် အပြောင်းအလဲပေါ့။
01 ကနေ 06 ဆိုပြီးတော့အရောင်6ရောင်ရှိပါတယ်နော်။ အရောင်လေးတွေက နေ့စဉ်သုံးလို့ရပြီးတော့ ငြိမ်တဲ့ဘက်ကိုသွားပါတယ်။ ဒီလို မျိုး2in 1 လိုထုတ်ထားတော့ အဆင်ပြေတယ်လေ။ တစ်ခုဝယ်ပြီး နှစ်မျိုးသုံးလို့ရတာပေါ့။ ပုံမှန်ဆိုးသလို lipstick မျိုးက applicator နဲ့ဆိုးရတဲ့ matte type ထက် အရောင်ထွက်က ဖျော့ပါတယ်။
02, 04 အရောင်လေးတွေကတော့ အညိုဘက်ကိုမှအနုနဲ့အရင့်ပါ။
01, 03 ကတော့ လိမ္မော်ကို အနုနဲ့ အနီဖောက်တဲ့ အရင့်ဘက်ကို သွားပါတယ်။
05, 06 ကတော့ ပန်းဆီရောင်အနုနဲ့ အရင့်ပါ။
ကြိုက်တာကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်နော်။ အရောင်တွေအားလုံးက နေ့တိုင်းလည်းဆိုးလို့ရတယ်။ တစ်နေ့တစ်ရောင်ဆိုးပြီလေ။
ပြောရရင်တော့ ကျောင်းသူလေးတွေ မုန့်ဖိုးစုဝယ်ရတဲ့ ကောင်မလေးတွေ, cosmetics ကို ပိုက်ဆံအများကြီးမသုံးချင်တဲ့ သူလေးတွေအတွက်ကတော့ ကွက်တိပါပဲနော်၊ အရည်အသွေးကလည်း ပြောစရာမရှိတဲ့ အပြင် ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သေချာလေးရေးပေးထားတော့ စိတ်ချရတယ်လေ။
water proof , kiss proof တော့ မဖြစ်ပါဘူးနော်? ဘာမှမစားရင်တော့ ခံပါတယ်။ အစားစားလိုက်ရင်တော့ ပျက်ပါတယ်။ ပြန်ပြီး retouch လေးတော့ လုပ်ပေးပေါ့နော်။
ကဲ စျေးနှုန်းသင့်တင့်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းတာလေးတွေကို အမြဲတမ်းရှာဖွေပေးနေတဲ့ cosmeticmyanmar page လေးကိုလည်း like လုပ်လိုက်ထားဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော်။ အချစ်တို့အတွက် ပစ္စည်းကောင်းလေးတွေကို အမြဲတမ်းလက်တို့ပေးနေမှာနော်။